New Oppo Find X2 Lite: atụmatụ, ọnụahịa na nnweta | Gam akporosis
Oppo Find X2 Lite bụ nke gọọmentị, ekwentị ọhụrụ nwere njikọ Snapdragon 765 na 5G
Obere ihe karịrị otu ọnwa gara aga, anyị nabatara abụọ n'ime arụmọrụ kacha elu nke 2020 a. Oppo nyere ha wee rute dị ka Chọta X2 na X2 Pro.
Ugbu a anyị achọtara onwe anyị ịnabata ụdị dị iche iche nke ọkọlọtọ ndị a Qualcomm Snapdragon 865, nke na-abụghị ndị ọzọ karịa Oppo Cho X2 Lite, ekwentị mkpanaaka n'etiti, ọ bụ ezie na ọ nweghị atụmatụ kachasị elu na nkọwapụta teknụzụ nke ụmụnne ya ndị tọrọ ya, nọ n'elu oke ya ebe ọ bụ na ọ na-abịa na Snapdragon 765, otu nke kacha mma chipsets na klas ya.
1 Ihe niile banyere Oppo Find X2 Lite ọhụrụ
1.1 Mpempe akwụkwọ Oppo Find X2 Lite
Ihe niile banyere Oppo Find X2 Lite ọhụrụ
Oppo Cho X2 Lite
Iji malite, nhazi nke ama ohuru a di iche na nke a choputara na Find X2 a ma ama, ma n'azụ ma n'ihu. Nke a bụ ihe a ga-atụ anya ya.
Ihe omuma ohuru ohuru nke Oppo Find X2 Lite weputara ojiji nke ihe ntanye na ihuenyo iji nye uzo a kpochapuru na udi nke uzo mmiri nke na adi karie mpaghara gam akporo gam akporo. Ihe dị mma bụ na emezigharị ọkwa a ka ọ dị ọhụụ na ọ na - ewere ụdị "V" ọ bụghị "U", dịka a pụrụ ịhụ na onyonyo ya.
Ihe ọzọ bụ na ngalaba azụ ya, ọ bụ ezie na ọ nweghị panel dị iche, nwere usoro foto dị iche. N'ezie, ọdịiche bụ isi ọ na-anọchite, na mgbakwunye na ụlọ nwere igwefoto, bụ ihe mmetụta igwefoto mgbakwunye nke ọ na-ebu iji chịkọta nhazi quadruple, n'adịghị ka Find X2 na X2 Pro, nke nwere igwefoto atọ.
Banyere ngalaba ọrụ aka, Ihe mbụ anyị mere ka ọ pụta ìhè bụ ihuenyo ya, nke bụ teknụzụ OLED, n'otu oge nke diagonal ọ na-etu ọnụ bụ sentimita 6.4, nke dị na ọkọlọtọ taa. Mkpebi ọ na-ewepụta bụ FullHD + na ngebichi na-ahụ nke na-adabere na ya bụ 20: 9, yabụ anyị na-ahụ otu ụzọ dị warara na elongated dị na ngwaọrụ a. Uche, okpokolo agba ndị na-ejide ihuenyo dị nnọọ warara, n'ụzọ dị mma; nke a bụ ihe na-emesi obi ụtọ na ihuenyo zuru oke. Ihe ọzọ bụ na ihuenyo ahụ na-arụ ọrụ na 60 Hz ma na-emepụta nchapụta kachasị nke nits 600.
Banyere arụmọrụ na ike, zuru ya ikwu na Snapdragon 765, nke bụ ikpo okwu nke ịhọrọ maka ngwaọrụ a, nwere ike ime ya niile. Ọ bụ isi asatọ nke na-arụ ọrụ na ume ọhụrụ kachasị na 2.3 GHz wee bịa na Adreno 620 GPU, yana otu nhazi nke 8 GB nke Ram na 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Batrị nke na - eme ihe niile a bụ 4.025 mAh ma ọ na - abịa na nkwado maka teknụzụ na - ebu ngwa ngwa VOOC 4.0., nke na-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ batrị 50% naanị na 20 nkeji.
Quad igwefoto modul mejupụtara igwefoto igwefoto 48 MP nwere oghere f / 1.7, oghere elekere obosara nke 8 MP nke na-arụ ọrụ abụọ dị ka nnukwu, lens 2 monochrome na 2 MP lens lens. Maka selfies, mmata ihu na ihe kamera 32 MP nwere oghere f / 2.0 dị.
Oppo Find X2 Pro na-agba ọsọ na sistemụ arụmọrụ nke agba 7 nke gam akporo 10 nwere ọtụtụ atụmatụ dị egwu. Ọ na-etu ọnụ njikọ 5G. Ekwentị na-abịa na ọrụ Smart 5G, nke na-agbanye na 4G na 5G na-enweghị nhịahụ, dabere na netwọkụ na bandwidth dịnụ. Nke a na-enyere aka ịhazi ike oriri ekwentị ma kwuo na ọ ga-eme ka ndụ batrị dị elu ruo 30%. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ ahụ nwere ihe ngosi antenna dị gburugburu nke nwere ọgụgụ isi na-agbanwe dị ka ọnọdụ onye ọrụ iji nweta akara ngosi kachasị mma.
Mpempe akwụkwọ Oppo Find X2 Lite
REALME chọta X2 LITE
IKIRU 6.4 »OLED FullHD + / 20: 9/600 nits nke nchaputa
Nhazi Qualcomm Snapdragon 765
Ohere TERLỌ N'IME 128 ma ọ bụ 256 GB (UFS 3.0)
Gbanwee CAMERA Quadruple 48 MP (f / 1.7) + 8 MP obosara na nnukwu + 2 MP monochrome + 2 MP maka ubi blur mmetụta
CAMERA N'IHU 32 MP (f / 2.0)
UMUAKA 4.025 mAh na VOCC 4.0 ngwa ngwa
OS A gam akporo 10 n’okpuru ColorOS 7
Njikọ Wi-Fi / Bluetooth / GPS + GLONASS + Galileo / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Na-ihuenyo mkpisiaka Reader / Face gnitionghọta / USB-C
Tutu na ibu ibu 7.96mm na 180g
A mara ọkwa Oppo Find X2 Lite ọnụahịa ego nke euro 500 maka ahịa Europe, ọ bụ ezie na enweghị nkọwa nke nnweta ma, yabụ amataghị mgbe ọ ga - amalite ire. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ China ekwuputala na ọ ga-abịa na agba agba abụọ, nke dị oji na ọcha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo Find X2 Lite bụ nke gọọmentị, ekwentị ọhụrụ nwere njikọ Snapdragon 765 na 5G
Nke a bụ OnePlus 8 Pro n'ime: nyere iwu nke ọma [+ Video]
Stọ Mmehie Superstars bụ egwuregwu ọhụrụ Platonic nwere ọtụtụ egwu egwu